29 August 2015 2:17
Madaxwaynaha Cusub oo qaaday wadadii Sheekh Shariif 20/09/2012
Wararka naga soo gaaraya madaxtooyada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa sheegaya in madaxwayne Xasan Sheekh Maxamuud Calasoow uu cagta saaray wadadii madaxwaynihii asaga ka horeeyay Shariif Sheekh Axmad.
Madaxwaynaha oo safarkii ugu horeeyay ku aadi doona dalka Uganda oo ay ciidamo ka joogaan Soomaalia ayaa la sheegayaa inuu u doortay Shariifka la taliye iyo saaxiib dhaw. Dadka siyaasadda odorosa ayaa saadaalinaya in aysan xaaladdu ka soo rayn doonin, inta Shariif oo la ogaa sida uu wax u maamulay la taliye u yahay madaxwaynaha cusub.
Isbaddalka ka dhacay Villa Somaliya ayay dadku si aad ah u soo dhaweeyeen ka dib tartankii madaxwaynaha ee dhacay 10/09/2012, halkaas oo ay guushu ku raacday Xasan Calasoow. Wararka soo baxaya ayaa tibaaxaya in ay durbaba bilaabatay qabyaalad aan loo meel dayin iyo weeraro xagga iclaanka ah kuwaasi oo dhammaantood ku wajahan Jubbooyinka iyo hawlgallada ka socda.
Sheekh Shariif oo waa hore caddaystay dagaalka uu kaga soo horjeedo xoraynta Jubbooyinka, asagoo sabab uga dhigay cabsi uu ka qabo in jubbooyinka maamulaan beesha Absame ee deegaanka dagta ayaa haatan ku guulaystay inuu ina adeerkii Xasan Sheekh ku qanciyo inuu qaato dhabbihii asagu hore u qaaday. Arintaas qayb ahaan waa laga aqbalay Shariifka.
Waxaa durbaba bilaabatay baaqyo loogu baaqayo in ay ciidamada Kenya ay ka baxaan Soomaaliya laguna wareejiyo ciidamada ka socda walaalaha Uganda iyo sokeeyaha Jabuuti. Waxaa billowday nacamlayn iyo isu-habarwacasho ku salaysan isir qabiil, oo ay baryahan isugu jiibinayeen Muqdisho iyo Hargaysa iyo Jabuuti.
Kenya ciidamada wadanka ka jooga ee ku socda magaca Amisom waa shisheeye ku soo xad-gudbay Soomaaliya, halka Uganda, Bururndi, Seraleone iyo Jabuuti loo arko sokeeye dhaw.
Waxaan qar-qarsi lahayn in qabyaalad six un faraha loola galay, ayadoo wararka qaar ay sheegayaan in nin ka soo jeeda beesha Irir Samaale loo magacaabo Ra�iisalwasaare si meesha looga saaro saamaynta beelaha Daaroodka.
Waxgaradka beesha Absame ayaa si adag indhaha ugu haysa dhaq-dhaqaaqa ka socda madaxtooyada Soomaaliya.